[Ukara] Wondershare DemoCreator: Best ihuenyo teepu
Ntak emi Họrọ Wondershare DemoCreator
DemoCreator Bụ ike ma dị mfe ihuenyo edekọ omume nke-enye gị ohere weghara desktọọpụ eme na ike video Nkuzi, demonstrations na n'ihu enweghị ihe ọ bụla mmemme nkà. Mgbe Ndekọ ọ bụla òké ije, pịa ma keystrokes, ị nwere ike mfe welie videos na ndetu, callouts na mmetụta dị otú ahụ dị ka pan-mbugharị na eserese, na mgbe ahụ na-ebipụta dị ka video, flash dabeere demos, ma ọ bụ òtù LMS dakọtara nchịkọta. Ọ bụ a kwesịrị maka oru nkwado & ahịa mkpara, educator na e-amụta Okike.
Rịba ama: The ugbu a version bụghị Ofụri Esịt dakọtara na Windows 7. Windows 7 ọrụ, biko download free ikpe tupu zụọ.
Mgbanwe ndekọ Ntọala
Record mpaghara ọ bụla nke desktọọpụ: Custom size, Ngwa & Full ihuenyo.
Record your ihuenyo na ụzọ gị: Were ihuenyo ogbugba ndekọ, zuru ngagharị ndekọ, ọzọ na ndekọ na multiple oru ngo mwekota.
Record na ụda: Record ihe ị na-ekwu (okwu) ma ọ bụ ihe ị na-anụ na kọmputa gị, na dezie-ewu na-nchịkọta akụkọ.
Ndekọ Control Panel: Real oge akara gị ndekọ usoro na akara obubọk ma ọ hotkeys: Countdown, ịkwụsịtụ, Redo na Kwụsị.
Mata gị operating omume: Record ihuenyo eme na ọdịyo na akpaaka-ederede.
Ọgaranya Illustration akpọkwa
Tinye callouts ma ọ bụ ndetu ọzọ nkọwa ederede ka demos.
Mee-ekere òkè animations ka ịtinye akpọkwa na shapes.
Mee kenkwukorita ngosi na buttons, Ndenye ma ọ bụ na-aga aga.
Jiri mbugharị-na-pan mmetụta maka ịkpọ ngosi n'ụzọ doro anya na obere egwuregwu.
Fanye ụlọ ọrụ logo ma ọ bụ ụghalaahịa maka mbọn.
Nye nzi preview ka ego gị dere ma ọ bụ dezie ọdịnaya.
Na-ina nzipu Nhọrọ
Mepụta Flash dabeere n'ihu ma ọ bụ video demos na awade a dịgasị iche iche nke na-ebipụta nhọrọ.
Ebipụta dị ka Flash dabeere demos maka web òkè.
Zọpụta dị a video (ruo 7 formats: AVI, MOV, MP4, WMV, MPEG-2, FLV, 3GP) ka video usu dị ka YouTube.
Export dị ka akpaaka-agba ọsọ exe maka mfe nkesa.
N'ịwa SCORM / AICC ngwugwu maka òtù LMS.
Ebipụta ma napụta dị ka E-mail Zip mgbakwunye.
Onye ọrụ kọwaa hotkeys welie ihuenyo ndekọ arụmọrụ na ahụmahụ.
Tinye a pụta ìhè ebe gburugburu cursor n'oge desktọọpụ ihuenyo ndekọ.
Capture ebe ga-eso cursor n'ebe ọ na-akwali n'oge ndekọ.
Mbugharị na Pan
Ka ị na-elekwasị anya na kpọmkwem ihuenyo nkọwa dị ka dee na cursor mmegharị &-eme ka ị na-ekwu n'ụzọ doro anya.
Dabere na ọrụ click edinam, na ngosi ga na-akpa àgwà dị iche iche ịgbakwunye interactivity ka video.